Wakiilada Beesha Caalamka ayaa bilaabay dadaalo xal loogu raadinayo khilaafka cusub ee ka…. – Hagaag.com
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa bilaabay dadaalo xal loogu raadinayo khilaafka cusub ee ka….
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Somalia, Amb. James Swan, Danjiraha Mareykanka ee dalka u fadhiyo, Amb. Donald Yamamoto iyo Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa shalay ka wadahadlay dadaalada Beesha Caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shirka lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka, lagana gudbo doodda ka dhalatay goobta lagu qabanayo shirkaasi.